ပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်တွေ ရောက်လာပြီဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဘယ်ဘားတွေမှာသွားပြီး ကဲကြမလဲ?
ဒီလို ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့အချိန်တွေကို ရွှင်မြူးတက်ကြွမှုတွေ၊ တောက်ပမှုတွေနဲ့အတူ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဘားတွေမှာ ကုန်ဆုံးလိုက်တော့နော်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ဘီယာအေးအေးလေးသောက်ရင်း Live music ရဲ့ မြူးကြွတဲ့ သံစဉ်တွေရယ်၊ လှပတဲ့ Rooftop view တွေရယ်၊ အကောင်းဆုံး အစားအစာတွေရယ်က ဘော်ဒါတို့ကို ပျော်ရွှင်တက်ကြွမှုတွေ ဖြစ်လာအောင် လွှမ်းခြုံထားမှာပါ။
ဒီပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ အချိန်တွေကို Live music ရယ်၊ ကောင်းမွန်လွန်းလှတဲ့ အစားအစာတွေရယ်၊ ဘီယာအေးအေးလေးနဲ့အတူ Eclipse Bar & Restaurant မှာ ဆင်နွှဲလိုက်ရအောင်။
မြန်မာပလာဇာ၊ ၄လွှာမှာရှိတဲ့ ဒီဘားဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တင်မကပဲ နိုင်ငံခြားသားတွေကြားမှာပါ ရေပန်းစားပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ပိတ်ရက်တွေကို ကြိုဆိုဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံး နေရာတစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ Live band ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် နာမည်ကြီး သီချင်းတီးခတ်မှုတွေကို ဘီယာ အေးအေးလေးသောက်ရင်း နားဆင်ရတာက အားလပ်ရက်ကို ပြီပြည့်စုံစွာ ကြိုဆိုမှု တစ်ခုပဲ မဟုတ်လား။
Live performances ကိုတော့ အပတ်စဉ် အင်္ဂါနေ့မှ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ ညနေ ၈နာရီမှ ၁၁နာရီအတွင်း နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ရုံးပိတ်ရက်မှာ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး အစားအစာတွေ စားရင်း ကယ်လိုရီတက်မှာကို စိတ်မပူနဲ့နော်။ ဝိတ်ပြန်ချဖို့ အချိန်တွေအများကြီး ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ဒီလို ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန်တွေကို အကြိုက်ဆုံး ဟင်းပွဲတွေနဲ့အတူ ဆင်နွှဲလိုက်ရအောင်။ အစားအသောက်ကောင်းကောင်းရတဲ့ ဆိုင်ကိုမှ ရွေးချယ်တဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ Bar Industry ကိုပဲ လှမ်းခဲ့တော့နော်။ အာရှစတိုင်လ် ဟင်းလျာမျိုးစုံနဲ့ ဥရောပစတိုင်လ် ဟင်းလျာမျိုးစုံကို တစ်နေရာထဲ သုံးဆောင်နိုင်မှာမို့ Foodie တို့အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ နေရာဆိုရင် မမှားဘူးနော်။
ဒါ့ပြင် Rock၊ Pop၊ Reggae၊ Jazz အစရှိတဲ့ ဂီတသံစဉ်မျိုးစုံကို တီးခတ်ပေးမဲ့ Live band ရဲ့ သံစဉ်တွေနဲ့အတူခေတ်ဟောင်းပုံစံ အပြင်အဆင်တွေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဒီဘားလေးမှာ ဘီယာအေးအေးလေးသောက်ရင်း အားလပ်ရက်အမှတ်တရတွေကို ဖန်တီးလိုက်ရအောင်။
ဒါမှမဟုတ် သင်က အပေါ်မှာ ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ နေရာတွေနဲ့ မတူဘဲ တမူထူးခြားတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ရှာဖွေနေလား? ဒါဆိုရင်တော့ အာရေဗစ်စတိုင်လ် ပြင်ဆင်ဖန်းတီးထားတဲ့ ခန်းမထဲမှာ DJရဲ့ ငြိမ့်ညောင်းသံစဉ်တွေနဲ့အတူ မြူးကြွစွာ ကခုန်လိုက်ရအောင်။
လာမယ့်ပိတ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိရှိနဲ့ night out ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေရင်တော့ Bar Burdubai က သင့်အတွက် အသင့်လျော်ဆုံး နေရာပဲလေ။ ဆိုဖာနိမ့်နိမ့်လေးတွေက သင့်ကို သက်သောင့်သက်သာရှိစေတဲ့အပြင် အာရေဗီယား စတိုင်လ် ဟင်းလျာတွေကို ဘီယာအေးအေးလေးတစ်ခွက်နဲ့အတူ သုံးဆောင်ရင်း live DJ ရဲ့ မြုးကြွတဲ့ သံစဉ်တွေကို နားထောင်ရတာကလည်း သာယာငြိမ့်ညောင်းမှုကို အဆုံးအစွန်ဆုံးထိ ရောက်ရှိသွားစေတာပေါ့။
အခုလို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ ကျင်းပနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မီးရောင်စုံအလှကို ကြည့်ရှုခံစားချင်လား?
ရှင်စောပုလမ်းနဲ့ ဗဟိုလမ်းထောင့် ၉လွှာမှာရှိတဲ့ Cocoon Cafe & Bar ကတော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ အလှအပတွေကို ရှုစားဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာပဲနော်။ ဘော်ဒါတွေနဲ့အတူ rooftop bar မှာ အထက်တန်းကျတဲ့ ခံစားမှုတွေနဲ့ ပိတ်ရက်ကို ဆင်နွှဲပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားရဲ့ ကြည်ညှိဖွယ်ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းကို ခံစားလိုက်ပါ။
Jamaican စတိုင်လ် မြူးကြွတဲ့ သံစဉ်တွေနဲ့ အားလပ်ရက်ရှည်ကို ကုန်ဆုံးချင်တာလား?
7th Joint Bar & Grill က ရန်ကုန်ရဲ့ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုလို့ရတဲ့ Reggae bar တစ်ခုုဆိုရင်လည်း မမှားဘူးနော်။ ဘီယာအေးအေးလေးသောက်ရင်း live music က တီးခတ်တဲ့ သံစဉ်ငြိမ့်ငြိမ့်လေးတွေကို နားထောင်ရတာကလည်း ခံစားမှုတစ်မျိုးပဲလေ။ အင်္ဂါနေ့ညတိုင်း သီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင် စတိတ်ပေါ်တက်ပြီး သီဆိုလို့ရတဲ့အပြင် ကိုယ်သီချင်းဆိုနေတဲ့ ပုံကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ snap တွေရိုက်ရင်း ပျော်စရာတွေ ဖန်တီးလို့ ရတာပေါ့။
Vista Rootftop Bar
နှစ်သစ်ကို လန်းဆန်းသွားစေမယ့် ဘီယာအေးအေးလေးနဲ့အတူ ရွှေတိဂုံဘုရားရဲ့ အနီးတစ်ဝိုက်က အသက်မဲ့သွားစေမယ့် ရှုခင်းတွေကို Rooftop ဘားပေါ်ကနေ ငေးမောရင်း ကြိုဆိုလိုက်ရအောင်။
လာမယ့် ၃၁ရက်နေ့ညမှာတော့ DJ JCZ ရဲ့ Live ဖျော်ဖြေမှုနဲ့အတူ နာမည်ကြီး hiphop artist တွေဖြစ်တဲ့ Jimmy Jacobs၊ Mr Luffie နဲ့ Boh Htet တို့ရဲ့ အမိုက်စားတင်ဆက်မှုတွေကို ကြည့်ရှုရင်း Heineken နဲ့အတူ New Year's Countdown ကို ဆင်နွှဲလိုက်ရအောင်။
နောက်ထပ် New Year's Eve party ကို ဆင်နွှဲလို့ကောင်းမယ့် နေရာတစ်ခုကတော့ Kelvin’s Pool Bar ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ပြင်သစ် DJ ပညာရှင် DJ Eazy နဲ့ အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆင်နွှဲလို့ ရမယ့် အခွင့်အရေးပဲလေ။ ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး လာရောက်ဖျော်ဖြေမယ့် DJ Eazy ရဲ့ တင်ဆက်မှုတွေကို နားထောင်ရင်း Heineken နဲ့အတူ အမုန်းကဲလိုက်ရအောင်။
DJ Eazy က၂၀၀၁ ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ပြီး DJ လောကကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး စင်မြင့်ထက်မှာ လန်းဆန်းတက်ကြွလာစေတဲ့ ဂီတသံစဉ်တွေနဲ့အတူ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လာမယ့်နှစ်သစ်မှာ Heineken သောက်ရင်း DJ Eazy ရဲ့ အမိုက်စား Hiphop၊ R&B နဲ့ electro သံစဉ်တွေနဲ့အတူ တညတာလုံး ကခုန်ကာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆင်နွှဲလိုက်ပါ။
အားလပ်ကိုရောက်ပြီဆိုတော့ Heniken က ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအစီအစဉ်တွေ စီစဉ်ထားတယ်နော်။ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ night out ထွက်မယ်လို့ စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာ ပြောပြပေးထားတဲ့ ဘားတွေကို လှမ်းလာခဲ့ပြီး Heineken ဘီယာ (ပုလင်း၊ စည်ဘီယာ၊ သံဗူး) ကြိုက်တဲ့ ၃လုံး ဝယ်ပြီး တစ်လုံးလက်ဆောင် ရယူလိုက်ပါ။
ဒီလိုပျော်ရွှင်ပွဲ အချိန်တွေကို ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ အအေးမြဆုံးဘီယာလေးနဲ့ ကုန်ဆုံးရတာက အကောင်းဆုံးပဲ မဟုတ်လား?
ဒါ့အပြင် အပတ်စဉ် သောကြာနေ့မှ စနေနေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နာမည်ကြီး ဘားတွေမှာ Heineken hoodie တွေကို မဲဖောက်ပေးနေတဲ့ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်လည်း ရှိနေတာမို့ အားလုံးပဲ Heineken နဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင်ကြစို့နော်။